China khabinethi emnyango itywina mveliso kunye nabenzi | Tianzheng
Itywina lomnyango weKhabinethi lenziwe nge-epdm yentsimbi yerabha, amagwebu esiponji, ukwakheka kwesiponji esinyinyithekileyo ngobugcisa bemveliso ephambili. Ngomphezulu ogudileyo kunye neempawu ezibalaseleyo zokulwa ukuguga, anti-imozulu kunye ne-anti-ozone. Ukunyamezelana okuhle okuqinileyo kunye nokuqina kokuqina kunye nokuziqhelanisa nendawo engalinganiyo. Idlala indima ebalulekileyo ekutywinweni nasekufumaneni. Ukunciphisa ukungena nokungena kwamanzi kunye nokungena ngaphakathi, ukujija okuxineneyo okuguqukayo, ubulukhuni obuphindwe kabini kunye nokungafikeleleki, imveliso ezinzileyo -ukuhanjiswa, ukuchaneka okuphezulu. Sinokubonelela kwaye senze iimveliso ngokweemfuno zabathengi bethu. Sine-iso9001 kunye ne-iatf16949, sithembisa umgangatho ophezulu kunye nokuhanjiswa okungcono.
Itywina lomnyango weKhabinethi lenziwe nge-epdm yentsimbi yerabha, igwebu lesiponji, ukwakheka kwesiponji sensimbi ngokuhamba phambili kwimveliso yobugcisa. Enobuso obugudileyo kunye neepropathi ezibalaseleyo zokulwa ukwaluphala, ukunganyangeki kwemozulu kunye ne-anti-ozone.
Ukunyamezelana okuhle okuqinileyo kunye nokuqina kokuqina kunye nokuziqhelanisa nendawo engalinganiyo. Idlala indima ebalulekileyo ekutywinweni nasekunciphiseni ukungena kwamanzi kunye nokungena komoya, ukujija okuxineneyo okuguqukayo, ubulukhuni obuphindwe kabini kunye nokungabinakufikeleleka, imveliso ezinzileyo -ukuhanjiswa, ukuthembela okuphezulu.we singanikezela size senze imveliso ngokweemfuno zabathengi bethu. Ndine-iso9001 kunye ne-iatf16949, sithembisa umgangatho ophezulu kunye nokuhanjiswa okungcono.
Ukumelana namaqondo obushushu: EPDM: -40 ℃ ~ + 120 ℃
Umbala: Bomvu, Luhlaza, Mnyama, Luhlaza, Orenji, njl njl Imibala eyahlukeneyo (inokuhlengahlengiswa ngokwesicelo)
Ubukhulu kunye nokumila: elicwangcisiweyo Njengoko umzobo yoMthengi okanye iisampuli okanye izinto isiseko
Inqanaba lokumelana naManzi: 100%
Inkqubo Production: extrusion bokwakha
Uhlobo lweMveliso: Icandelo le-U, iprofayili yobume be-H, njl.
Umsebenzi: uphawu, ukukhusela izinambuzane, umoya, amanzi, ukungqubana kunye nokugquma kwesandi
Ukupakisha: roll kunye ibhokisi ezomeleleyo ngaphandle okanye ngokweemfuno zabathengi '
Umtya werabha otywiniweyo weengcango zekhabinethi / amatywina eminyango yekhabinethi abandakanya i-epdm eqinileyo "U" yeChannel ye-Channel kunye ne-epdm ye-bulb yesiponji, kunye neziqwengana ezizodwa zentsimbi kunye nolwimi olubambekayo ukubonelela ngokubamba ngcono, itywina leerabha elikhutshiweyo lisetyenziswa kwilori , itrektara, izithuthi, oomatshini, umnyango wekhabhathi yemoto, itraki yeveni, inqwelomoya, iatv fender, itrektara, isithuthuthu iglasi ifayibha yentsimbi .etc
Yahlula itywina lekhabhathi yerabha. Emva koko, susa i-liner exhaswa kwicala lokuncamathela kwitywina leerabha kwaye ucinezele itywina lerabha endaweni leyo, emva koko usike itywina leerabha kubungakanani. Phinda le nkqubo kulo lonke ucango. Okokugqibela, jonga ukuqinisekisa ukuba kukho ukulingana okulingeneyo phakathi komnyango kunye netywina lerabha, emva koko siya kugqiba ukufakela.
Egqithileyo Umatshini wokutywina
Okulandelayo: Foma ngerabha Tywina
Ikhitshi leKhabinethi yoMnyango weSalign Strip